३१ मिलियन डलरको प्रतिवद्धतासहित अफगानिस्तानमा सहायता पठाउँदै चीन, नजर खनिजतिर? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
३१ मिलियन डलरको प्रतिवद्धतासहित अफगानिस्तानमा सहायता पठाउँदै चीन, नजर खनिजतिर?
अमेरिका र अन्य शक्तिराष्ट्रहरुले अफगानिस्तानमा छाडेको आर्थिक रिक्तता पूर्ति गर्दै चीनले तालिवान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा सहायता पठाउन सुरु गरिसकेको छ । चीनले गतसाता अफगानिस्तानलाई ३१ मिलियन डलरको खाद्य, औषधी र भ्याक्सिन सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने काबुलमा रहेको चीनको दूतावास पनि खुला नै राखेको छ ।
तालिवानले अफगानिस्तानमा अगस्त १५ मा नियन्त्रण कायम गरेदेखि बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी बैंकको नियन्त्रणमा रहेको १० बिलियन डलरको अफगान भण्डार फ्रिज गरिदिएको थियो । त्यसैगरी बेलायत, जर्मनी लगायतका पश्चिमा देशहरुले पनि तालिवानलाई बैधानिकता नदिने आवश्यकता औल्याउँदै सहायता रोकेका थिए । विश्व बैंक र नाटोले पनि त्यस्तै गरेका छन् ।
यो अवस्थामा अगस्त १५ पछि अफगानिस्तानमा मुख्य वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता जनाउने चीन पहिलो मुख्य देश हो । सेप्टेम्बर ७ मा राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानका सर्वसाधारणलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको पृष्ठभूमिमा अफगानिस्तानमा मानवीय संकटको चेतावनी दिएको थियो । आर्थिक रिक्तता पूर्तिका लागि २ सय मिलियन डलरको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको थियो ।
नयाँ तालिवान शासनले प्राकृतिक भण्डारमा चीनको पहुच विस्तार गर्नका लागि संकेत दिएको छ । साथै चीनले आफ्नो सिमा सरक्षित गर्ने रणनीति अन्तरगत पनि तालिवानलाई समर्थन गरिरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सेप्टेम्बर ३ मा तालिवानले चीनका तर्फबाट दूतावास खुला राख्ने र सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता आएको बताएको थियो । जुलाईको अन्तिम तिर अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइरहदा चीनका विदेशमन्त्री वाङ वीले तालिवान नेताहरुलाई स्वागत गरेका थिए । जसबाट दुई शक्तिबीचको सम्बन्ध राम्रो हुने संकेत देखिएको थियो ।
अमेरिकाको फिर्तीसँगै चीनले काबुलमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको जुनसुकै चीजका लागि सहायता गर्नसक्ने चीनको जनमुक्ति सेनाका पूर्व कर्नेल जाउ बोले न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका थिए । उनले राजनीतिक निष्पक्षता र आर्थिक लगानीका सन्दर्भमा चीनले सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
जुलाई २८ मा चीनमा भएको भेटघाटमा तालिवान नेता अब्दुल घानी बरादर र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी
बरिष्ठ कूटनीतिज्ञका अनुशार चीनले अफगानिस्तानको भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि सयौं मिलियन डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जुलाईको अन्तिममा तालिवान नेता अब्दुल घानी बरादर र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वीबीच भएको भेटमा अफगानिस्तानमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधिका लागि अनुमति नदिने सहमति भएको थियो ।
अहिले चीनले गरेको सहायतालाई तालिवानले स्वागत गरेको छ । चीन आफूहरुको असाध्यै महत्वपूर्ण साझेदार भएको र आफूहरुका लागि एउटा असाधारण अवशर रहेको तालिवान प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले सेप्टेम्बर ३ मा बताएका थिए । चीन अफगानिस्तानको पुननिर्माण र अफगानिस्तानमा लगानी गर्नका लागि तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
चीनले अफगानिस्तानमा रहेको खनिज भण्डारमा पहुच कायम गर्न चाहने अमेरिकाको सेन्ट्रल कमाण्डका कमाण्डर जनरल केनेथ म्याकेन्जीले मध्य जुनमा बताएका थिए । सेप्टेम्बरको सुरुसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न २६० मिलियनको डलरको सहायतालाई सुचारु गरेको थियो । तर यी कार्यक्रमहरु तालिवानमार्फत नभई स्थानीय कर्मचारीहरुमार्फत संचालन हुनेछन् ।
चीनको साथसाथै अहिले चीनको सहयोगी राष्ट्रका रुपमा रहेको पाकिस्तानले पनि अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि तालिवानलाई समर्थन गर्दै आएको आरोप खेप्दै आएको पाकिस्तानले अगस्त १५ देखि कम्तीमा ४ वटा विमानभरी सहायता पठाएको छ ।